Oktoobar | 2008 | WEEJIDOW
Archive for Oktoobar, 2008
Nayroobi: Madaxweynayaasha IGAD oo soo xiray kulan ay ku lahaayeen Magaalada Nayroobi.
Oktoobar 29, 2008
Nayroobi(Waajidpress)- Madaxweynayaasha IGAD oo shirsanaa ilaa saaka ayaa maanta soo xiray fadhigoodii waxa ayna ka soo saareen qodobo dhowr ah oo ay aaminsan yihiin in wax looga qaban karo dhibaatada ka taagan gudaha dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Kenya Mwai Kibeki & Raysalwasaaraha Itoobiya Meles Zanewi oo hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadgalyada dalka Soomaaliya, markaasna la sameeyo horumar toos ah oo laga sameeyo.
Qodobadii ay gaareen Madaxweynayaasha IGAD ayaa kala ahaa.
1: In la dhiso dawlad loo dhan yahay oo ku dhisan habka federaalka laguna qaybsado nidaamka 4.5, laguna dhiso muddo 15 maalmood oo ka bilaabaneysa maanta oo taarikhda ah Oct/29/2008.
2: In la bilaabo diyaarinta mudo gaaban dastuurkii lagu balamay
3: In mudo 15 maalmood ah lagu dhiso maamulka Gobolka Banaadir.
4: In Baarlamanka uu ka wada shaqeeyo, isla markaana dalka gudihiisa ay ku laabtaan wixii ay qabtaan ay la socdaan urur Goboleedka IGAD.
5: In wadamada ku jira Urur Goboleedka IGAD ay madaxdoodu shiraan 6 bil oo kasta iyagoo ka shiraya xaalada Soomaaliya, iyagoo labadii bilood qaadanaya warbixino ku aadan xaalada Soomaaliya.
6: In ay si buuxda u cadahay in dawlada federaalka ay ku fashilantey waxyaabo badan oo looga fadhiyey
7: In la sii wado arimaha dib u heshiisiinta, isla markaana laga shaqeeyo sidii dhinacyada ka maqan nidaamka dawlada lagu soo daro.
Nairobi: Warbixin ku saabsan shirka Igad iyo dowlada federaalka ee Kenya ka bilowdey
Urur goboleedka IGAD oo isagu qeyb weyn ku leh dhismaha iyo daadihinta dowladda KMG ah ee ka dhalatay Soomaaliya ayaa madax ka tirsan oo shirkaasi ka soo qeyb gashay waxay ka hadleen waxqabad la’aanta xukuumadda, doorka Baarlamaanka uu ku leeyahay xukuumada uu soo doortay Madaxweynaheeda, waxaana madaxda IGAD ee shirkaasi khudbadaha ka jeediyay oo u badnaa Wasiiro dowladaha ku jira IGAD, iyadoo madaxda dalalka deriska la ah Soomaaliya ay dhaliileen xukuumadda.
Magaaladda Nairobi shirkii uga socday dowladda Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD oo saakay furmay ayaa waxaa halkaasi khudbado fara badan ka jeediyay Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka xukuumadda tabarta yar ee Soomaaliya, kuwaasi oo iyagu siyaabo kala duwan uga hadlay waxqabadka xukuumadda KMG ah, caqabadaha hortaagan haddiiba ay wax qaban lahayd, iyagoona Xildhibaanada qaarkood ay soo jeediyeen fikrado ku aadan sida ay xukuumadda uga gudbi karto caqabadaha ku hor dadban iyo fikrado kale oo badan.
Kulanka oo uu hogaaminayay wasiirka arimaha dibada ee dowlada Ethiopia Siyun Mesfin ayaa waxaa intii uu socday qodabado kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah xildhibaanada Barlamanka KMG kuwaasi oo aad u caraysana islamarkaana ka warbixinay waxyaabihii dib u dhac u keenay Xukuumada iyo Barlamankeeda halka kuwa kale ay eeda dhusha ugu tuurayaan madaxa sar sare ee dowlada KMG oo ay ku sheegeen in ay ka dambeeyeen waxyaabaha hoos u dhaca u keenay dowlada KMG Soomaaliya.
Qaar ka mid ah xildhibaanada barlamanka ayaa halkaasi waxaa ay ka sheegeen in dowlada KMG Soomaaliya 4-tii sano ee la soo dhaafay ay ka socon weysay madaxda sare sare ee dowlada KMG gaar ahaan madaxwyne Yuusuf iyagoo dalbaday in la rido dowlada KMG Soomaaliya,waxaana marka ay xildhibaanadu arinkaasi soo jeediyeen halkaasi ka dhashay buuq iyo rabshado fara badan iyagoo la arkayay xildhibaano doonaya in ay si qasab ah maykarfoonada u qabsadaan.
Wasiirka arimaha dibada ee wadanka Itoobiya Siyun Mesfin ayaa Baarlamaanka u sheegay in magaalada Nairobi aan lagu ridi karin dowlada KMG oo markeedii horayba lagu aas aasay waxaa uu ku war galiyay in hadii ay doonayaan in ay dowlada ridaan ay kula laabtaan magaalada Baydhabo oo xarun u ah Barlamanka KMG Soomaaliya. Xildhibaano kor u dhaafay ilaa boqol xildhibaan kuwaasi oo watay waraawqo ay ku dalbanayaan in la rado hogaanka sare sare ee dowlada KMG Soomaaliya oo ay ku sheegeen in uu yahay mid waajibaadkii saarnaa gudan waayay kuwaasi oo hankii ay lahaayeen ay ku celiyeen Urur goboleedka IGAD madaxdeeda shirka ugu qeyb qaadaneysay oo uu horkacayay wasiirka arimaha dibada ee wadanla Ethiopia Siyun Mesfin.
Jawiga guud ee shirkii maanta Nairobi ku dhex maray Baarlamaanka Soomaaliya iyo ururka IGAD ayaa wax yar kaddib markii uu socay shirka waxaa hareeyay buuq iyo sawaxan ay ku dhaqaaqeen Xildhibaanada Baarlamaanka, kuwaasi oo ku qeylinaya inay khudbado ka jeediyaan halkaasi, waxaana markii dambe buuqaasi soo dhex galay Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Seyoum Masfin, isagoona Xildhibaanada u sheegay in maalinimada berri ah la isugu soo noqon doono shirka, isla markaana xildhibaan kasta uu soo gudbin karo fikradiisa.
Kulan kale ayaa lagu wadaa in maalinta barito ah uu ka dhaco howlka KICC oo ah halka uu shirku ugu socdo madaxda dowlada iyo Urur goboleedka IGAD kaasi oo ay yeelan doonaan madaxweynayaasha IGAD iyo wasiirada dowlada KMG iyo Barlamanka Soomaaliya.
Xoghayihii madax tooyada Somaliland iyo taliyihii ilaalada madaxtooyada oo ka mid noqday tobanaan ruux oo lagu dilay qaraxyadii saaka hargeysa ka dhacay.
Sida ay sheegayaan warar aanu goor dhoweyto ka helnay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaliland waxaa qaraxyo mataano ahaa oo saaka magaaladaas ka dhacay ku dhintay in ka badan 30 ruux oo uu ka mid ahaa xoghayihii madaxtooyada Rayaale, Daahir cali Ciid xaaji iyo taliyihii ciidamada illaada madaxtooyada.
Sida ay sheegayaan warar aanu goor dhoweyto ka helnay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaliland waxaa qaraxyo mataano ahaa oo saaka magaaladaas ka dhacay ku dhintay in ka badan 20 ruux oo ay ka mid ahaayeen xoghayihii madaxtooyada Rayaale, Daahir cali Ciid xaaji iyo taliyihii ciidamada illaada madaxtooyada.
Qaraxyada oo ahaa sadex dhacayna daqiiqado is xig xigay ayaa waxaa ku naf waayay sida la sheegayo dad tiardoodu kor u dhaafeyso 30 –eemyo iyadoo dhaawucuna uu intaa aad uga badan yahay sida ay sheegayaan waraka laga helayo isbitaaladu.
Xarumaha qaraxyada lala eegtay ayaa waxaa ka mida Madaxtooyada, xarunta UNDP iyo safaarada Itoobiya ee magaalada hargeysa.
Xaalada hargeysa ayaa haatan aad u kacsan waxaana goob kasta lasoo dhoobay ciidamo kuwa amaanka ah si ay xaalada u qaboojiyaan,iyadoona uu shir deg deg ah haatan u suconayo masuuliyinta maamulka Rayaale.
Kusimihii gudoomiyaha gobolka Sh/hoose oo goor u geeriyooda dhaawac shalay ka soo gaaray Qarax miin kula kacaday magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose.
Ku simihii gudoomiyaha gobolka Sh/hoose Max’ed Max’ud Cilmi ayaa u geeriyooday Qarax miino oo shalay kula kacaday magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose.
Sida uu idaacada Waajidpress u xaqiijiyay C/fitaax Ibraahin Shaaweeye masuulkasi ayaa ku geeriyooday cisbitaalka Ciidamada AMISOM oo loo Keenay Dhaawac ahaan.
Max’ed Max’ud Cilmi ayaa waxaa dhawac cuslus uu shalay ka soo gaaray qarax Miino oo magaalada Marka lagula eegtay isaga iyo taliye ku xigeenkii ciidamada Booliiska Gobolka Sh/hoose Nuuriye Cali Faarax oo shalay u geriyooday Qaraxaasi.
Shariif Sheikh Aadan iyo Sheikh Shariif iyo wafdi ay hogaaminyo oo ku biiray shirka IGAD.
Wafdi balaaran oo uu hogaaminayo Guuddoomiyaha isbaheysiga dib u Xoreynta Soomaaliya ayaa goor dhaw waxa ay ku biireen Shirka Urur Goboleedka IGAD oo maalintii labaad galay.
Wafdiga uu hogaaminayo Shariif Xasan Sheikh Aadan waxaa ka mid ah Cumar Xaashi Adaan,maxamed Cabdi Yuusuf iyo Sheikh Shariif iyo kuwo kale oo fara badan.
Lama Yaqaan ujeedada xubnaha isbaheysiga garabka Jabuuti ay ugu biireen shirka IGAD ee dhaxmaraya Dowlada KMG,taasoo uumujineysa in ay wada shaqeyn ka dhaxeyso xubnaha isbaheyisga grabka Jabuuti.
Xubanaha isbaheysiga garabka jabuuti iyo Dowlada KMG ayaa heshiis waxa ay ku gaareen dalka Jabuuti iyadoo ay ka soo horjeesteen xoogaga Muqaawamada soomaaliya.
Shirar kala Duwan oo Maantay ka Dhacay Magaalada Nairobi-Madaxweyne C/laahi Yusuf oo la canaantay
Nairobi: Xarunta Shirarka ee KICC ee Bartamaha Nairobi ayaa maanta waxaa ka soconaayey Shirar is xig xiga oo ay soo qaban qaabiyeen Wadamada IGAD, Shir kii ugu horeeyey ayaa waxaa wada yeeshay Wasiirada Arimaha Dibada Shirkaasna waxa uu ahaa Shir Albaabadu uxiran yihiin oo aana la ogayn Waxa ay uga wada hadleen.
Shirkii Labaad ayaa waxaa wada yeeshay Masuuliyiinta ugu sareeya Dawlada Somaaliya iyo Wasiiro Arimo Dibadeedka Wadamada ku bahoobay Urur Goboleedka IGAD, kulankaan ayaa ahaa kulan wada tashi ah oo Madaxda Somaalida iyo Wasiirada IGAD ay wada lahaayeen ayadoona sida ila lagu kalsoon yahay laga soo xigtay Kulankaan lagu dhaleeceeyey Madaxda Sar sare ee Dawlada Somaaliya oo uu ugu horeeyo Madaxweyne C/laahi Yuusuf Ahmed.
Shirka Sedexaad ayaa la is kugu soo noqday Bacdo Qado shirkaas oo saacado soconaayeyna waxaa wada yeeshay Xubnaha Barlamaanka Somaaliya, Wasiirada Arimaha Dibada IGAD, iyo Madaxda ugu saraysa Dawlada Somaaliya, Shirkaas ayaa ahaa shirkii ugu kululaa Shirarkii maanta ka dhacay Xarunta Shirarka ee Kenyatta International Conference Centre-( KICC).
Shirkaan oo bilowday 5:00 Galbnimo waqtiga Nairobi ayaa ahaa shir aad uxasaasi ahaa aydoona ay kasoo qayb galeen Guud ahaan Xildhibaanada Barlamaanka Somaaliya ee Nairobi Kenya ku sugan, Shirkaan ayaa Qudbooyinkii laga soo jeediyey aad loogu weeraray Siyaasad Xumida Madaxweyne C/laahi Yuusuf iyo Habacsanaanta Dawlada la dagta mudooyinkii u dambeeyey.
Waxaa shirka hadalo kala duwan ka soo jeeediyey masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arimaha dibada ee Kenya Musas Watangula, wasiirka arimaha dibada Ethiopia Siyum Musfin, wasiirka arimaha dibada DFKMG Cali Axmed Jaamac Jangali, Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya, iyo wakiilo ka socdey urur Goboleedka IGAD.
Musas Watanugula (Wasiirka arimaha dibada Kenya)
Wasiirka oo hadley wuxuu shirka ka sheegay in ujeedadu ay tahay in la eego waxyaabihii u qabsoomay dawlada iyo waxyaabah u dhiman, wuxuu sheegay in arimaha shirka sidoo kale ay door ku leeyihiin madaxda wadamada ku jira urur Goboleedka IGAD kuwaasi oo uu sheegay in shirka maalinta beri ah ku soo biiri doonaan.
Siyuum Mesfin (Wasiirka arimaha dibada Ethiopia)
Musfin wuxuu ka hadley arimaha ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan gudaha dalka, wuxuu sheegay in joogitaanka ciidamada Itoobiya gudaha Soomaaliya ay ku tahay dhibaato, wuxuuna sheegay in ay ku dhib qabaan joogitaankaasi, waxaana sidoo kale uu xusey in dhibaatada Soomaaliya aanay aheyn mid xaga amaanka ah oo kaliya, balse ay tahay tan ugu weyn dhanka siyaasada, isagoo xusey in hogaamiyeyaasha siyaasada Soomaalida ay ku fashilmeen hawlihodii taasina ay tahay halka dhibaatadu u badan tahay. Wasiirka Arimaha Dibada ayaa intii ay qudbadiisu socotay dhawr jeer kusoo cel ceshay Fashilka iyo Habacsanaanta la dagtay Dawlada Somaaliya, Waxa uuna aad uwareeray Madaxda ugu saraysa Dawlada Somaaliya Asagoona sheegay in ay kudan waayeen Waajibaad koodi.
Wasiirka Arimaha DIbada Ethopia ayaa sheegay Fashilka Dawlada Somaaliya ku yimid in ay marqaati ka yihiin Xubnaha Barlamaanka Somaaliya oo markaas hor fadhiyey, isagoo farta kusii fiiqaya ayuuna yiri Idinkaa marqaati ka ah Fashilka iyo wax yaabaha jira.
Axmadu Walde Cabdallah (Wakiilka Qaramada Midoobay)
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Axmed Walde Cabdallah oo isagu ka hadley ayaa wuxuu sheegay in uu shirkan ku faraxsan yahay, waxaana uu ka warbixiyey arimahii ugu dambeeyey ee dhanka dib u heshiisiinta gaar ahaan shirkii dhawaan ay ku yeesheen magaalada Jabuuti dhinacyada DFKMG ah iyo Isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya, kuwaasi oo heshiis ku gaaray halkaasi.
Maxbuub Macalin (Xoghaynta IGAD)
Maxbuub Macalin wuxuu ka hadley shirkan iyo ahmiyada uu leeyahay, waxaana uu sheegay in IGAD ay shirkan uga dan leedahay in la isku soo dhaweeyo dhinacyada siyaasada ee Soomaalida ee isdiidan, waxaana uu farta ku fiiqay in la doonayo in laga gaaro arimahaasi heshiis guud.
Bari ayaa la sadalinayaa in ay dhacaan Kulama kale oo isla Arimahaan lagu falan qayn doono ayada oo aana la ogayn go’aanka kama dambaynta ah ee Shirkaan laga soo saari doono.
Shirarkaan IGAD ay iclaamisay ayaana ilaa iyo haatan la ogayn waxa dhabta ah ee ay ku saab san yihiin, ayadoona Shirar-kaan warar kala duwan oo is qilaafaya ay kasoo baxayaan, wararka Qaar ayaa sheegaya in Shirar kaan Bari soo gaba gaboobaya in xilalka looga xayuubin doono Madaxda sar sare ee Dawlada Federaalka ku meel gaar ka ah ee Somaaliya, sidoo kale waxaa jira warar kale oo soo baxaya oo sheegaya in uu xilka Madaxweyne nimo is ka casili doono Madaxweynaha Dawlada Federaalka C/laahi Yuusuf Axmed kadib wax qabad la,aan Afartii sano ee uu xilka hayey iyo is qab qabsi iyo qilaaf joogtaa oo ka dhex abuurmay xubnaha sar sare ee dawlada Somaaliya.
Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya oo haatan ay ku sugan yihiin Xubnihii Sar sare ee Dawlada Federaalka Somaaliya iyo Xubnaha Barlamaanka ayaa waxaa soo baxaya sidoo kale warar tibaaxaya in Xubno aad utiro badan oo ka mid ah Barlamaanka Somaaliya ay Wadaan Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Somaaliya oo ay xilka uga xayuubinayaan kadib Arimo is biirstay oo uu ku kacay C/laahi Yuusuf.
Raysalwasaarihii hore ee Somaaliya ee xilka is ka casilay haatana ah Xubin Barlamaan ka ka tirsan Prof Cali Mohamed Geedi ayaa lagu xasuus-taa in tii uu xilka Raysalwasaare nimo hayey Wax qabad lawada dareemay,Horumar muuqda,Ammaan, Ayadoo in tii uusan Xilkaas is ka casilin Ay Dawlada Federaalka Ku meel gaar ka ah ee Somaaliya ay ka talinaysay inta badan Gobolada Dalka Somaaliya, Amniguna uu ahaa mid aad uwanaagsan oo nabad lagu wada farxay uu dhaliyey kadib dagaalo xoogan oo Awoodoodi lagu wiiqay Kooxihii kasoo hor jeeday Dawladnimada ee Argagixisada Caalamiga ah Gacan saar ka la lahaa.
Mudooyinkii udambeeyey ayaa Dawlada Federaalka Ku meel gaar ka ah ee Somaaliya laga dareemayey Habacsanaan Baahsan iyo Wax qaban la,aan ayadoo ay xoogaysteen Kooxaha Nabad diid ka ah ee ka soo hor jeeda Qaran nimada Somaaliya.
War deg deg ah Qaraxyo ruxay Magaalada Bosaso oo sababay Dhimasho iyo dhawc
War Deg deg ah: Wararka naga soo gaaraya Magaalada Boosaaaso ayaa sheegaya in Laba qarax oo aad u waa weyn oo laga wada maqley xaafadaha magaalada Boosaso ayaa daqiiqado ka hor ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari kuwaas oo lala egtay laba xarumood oo aay leeyihiin Ciidamada sirdoonka Puntland ee PISTA oo ku kula yala waqooyiga iyo galbeedka Magaalada Boosaaso.
Qaraxyadan oo kala dmabeeyey daqiiqado ayaa in ta la ogyahay waxaa ku dhintay sedax asgari oo katirsan kuwa PISTA sida aay noo xaqiijiyeen dad goob jogyaal ah waxana wararku intaa ku sii darayaan in aay jiraa dhawcya kale oo soo gaaray dad rayid ah iyo qaar ka tirsan ciiamada waxuuna qaraxyadu ahayenkuwa ka dhashay Bamka gacnta laga tuuro lamana yaqaano ilaa iyo haatan cida rasi ahaan kadanbeesa
Ciidamada PISTA oo aay ka muuqato caro xoogan ayaa lugu soo waramaya in aay xireen dhaamaan wadooyinka soo gala Xarummahaas qaraxyada ka dhaceen waxeena sidoo kale xireen wadooyinka soo gala xarun cafimaad oo ku tala bartamaha Mgaalada oo lugu magcaabo Puntland Hospitaal oo la keenay dadkii dhawacyada soo gareen waxeena u diideen dadka in aay soo eegaan dadka waxyeeldu soo garen.
Qaraxyadaan ayaan wax sameen ah ku yeelan howlihii Ganacsiga ee Dakada wayen maadaama mid kamid aha xarumahas aay u dhaweed Dakada wayen ee Magaalada Boosaaso waxana lugu soo waramayaa in aay haatan xaalada Magaaladu tahay mid degan mana jirto cid ilaa iyo haatan wax warbixin ah ka soo saaratay oo ka tirsan Xukuumada ama Maamulka Gobalka Bari .
Qaraxyo lala beegsaday Xarunta Madaxtooyada Maamulka Somaliland iyo Safaaradda Itoobiya
Hargeysa: Magaalada Hargeysa ayaa saaka ku waabariisatay Qaraxyo sedex ah oo lala beegsaday Madaxtooyada Maamulka Soomaliland ayaa waxay sheegayaan in seddex goobood oo magaaladaas ku yaala qaraxyo lala beegsaday.
Meelaha qaraxyada lala beegsaday ayaa waxay kala yihiin Xarunta Madaxtooyada maaulka Somalilnad, Safaaradda ay Itoobiya ku leedahay magaalada Hargeysa iyo Xarunta Hay’adda UNDP ee Hargeysa fadhigeedu yahay.
Qasaaraha kasoo gaaray halkaasi ayaanan lasoo bandhigin balse waxaa jirtay dhimasho iyo dhaawacyo soo gaaray dadkii ilaalada ka ahaa iyadoo ay jiri kartay inay dhimashada iyo dhaawaca uu yahay mid aad tiro badan.
Qaraxyadan maanta ka dhacay Magaalada Hargeysa ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee ka dhaca magaalada Hargeysa oo lala beegsado goobo ku yaala Magaalada Hargeysa oo ammaankeeda uu ahaa mid la isku halayn karay.
Qaraxyadaani ayaa aad looga wada naxay magaalada Hargeysa oo dhan mana jirto cid sheegatay iyadoo ay jiri karto in saacadaha soo socda ay sheegtaan ururo Islaamiyiin ah.
Seddex Qarax oo lala beegsaday goobo muhiim ah oo ku yaala Magaalada Hargeysa
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Hargeysa ee Xarunta u ah Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxay sheegayaan in seddex goobood oo magaaladaas ku yaala qaraxyo lala beegsaday.
Goobaha qaraxyada lala beegsaday ayaa waxay kala yihiin Xarunta Madaxtooyada Somalilnad, Safaaradda ay Itoobiya ku leedahay Hargeysa iyo Xarunta Hay’adda UNDP ee Hargeysa.
Waa waqti hore in la sheego khasaaraha ka dhashay qaraxyadaas oo ahaa kuwo xooggan, waxaana la filayaa in ay saacadaha soo socda soo baxaan khasaaraha dhimasho, dhaawac iyo burburka hantiyeed ee ka dhashay qaraxyadaas.
Qaraxyadan maanta ka dhacay Magaalada Hargeysa ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyay oo ceynkooda ah oo lala beegsado goobo ku yaala Magaalada Hargeysa oo ammaankeeda uu ahaa mid hagaagsan.
Qaraxyadan ayaa waxay ku soo beegmeen iyadoo Gobollo ka tirsan Somaliland ay ka socoto diiwaangelinta dadka ka qeybgelaya doorashooyinka Somaliland ee socda, kuwaasi oo ay dadka Somaliland ku dooranayaan cidda ay doonayaan in ay madax u noqoto.
XILDHIBAAN MOWLIID MACAANI: “Sac Ruqday oo ay Afar Nin kicin weysay mid Maqaarka raba ayaa ku jira”
Xildhibaan Mowliid Macaani Maxamuud oo ka mid ahaa Mudanayaashii shalay loo xulay in ay la hadlayaan Wasiirrada Arrimaha Dibadda IGAD ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan meesha ay ku dambeyso dowladdii ay IGAD afar sano ka hor u soo dhistay Soomaaliya.
Mowliid oo inta badan ay xildhibaannada u sacab tumayeen intii uu hadlayay ayaa wuxuu sheegay in Dalka Soomaaliya uu burburay dhinac walba, dowladdii loo soo dhisay in ay burburkaas wax ka qabatana ay wax qaban weysay, wuxuuna carrabka ku dhuftay in ay mas’uuliyadda arrintaas leeyihiin dhamaan xubnaha Dowladda Federaalka, gaar ahaan madaxda sare ee Dowladda oo ka bixi waayay is-qabqabsi dhexdooda ah.
“Sac Ruqday oo ay Afar Nin kicin weysay mid Maqaarka raba ayaa ku jira” ayuu yiri Mowliid Macaani Maxamed oo sheegay in uu taasi ula jeedo in dad ka mid ah Dowladda aysan rabin in ay dowladda cagaheeda ku istaagto oo ay shaqeyso.
Xildhibaan Mowliid Macaani oo sii hadlayay waxaa uu u mahadceliyay Urur Goboleedka IGAD oo Dowladda Federaalka soo dhisay, welina daba socda, sidoo kalena wuxuu u mahadceliyay Beesha Caalamka oo iyadana taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale siisay Dowladda Federaalka Soomaaliya, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Intaas kadib Mowliid Macaani waxaa uu baaq u diray Dowladda Mareykanka oo uu sheegay in wixii ka dambeeyay 1993-kii oo ciidamadooda lagula dagaallamay Magaalada Muqdisho uu Mareykanka si aan muuqan ula macaamilo Soomaaliya.
“Mareykanka labo mid ha yeelo: (1) Inta nagu soo duulo hana qabsado sida uu yeelay waddamo dhowr ah oo caalamka ku yaala (2) ama siyaasadda uu nagula dhaqmayo wax haka bedelo oo saaxibtinimada aan u heyno ha nagula dhaqmo”ayuu yiri Mowliid Macaani Maxamuud.
Wuxuu intaas ku daray Mowliid Macaani in ay Dadka Soomaaliyeed kala garanayaan qofkii wax u qabtay iyo qofkii dhibaato u geystay, “Soomaaliya waa maro jeex-jeexantay oo kaliya sidaas darteed waxaan beesha caalamka ka codsaneynaa inay gacan nagu siiso sidii aan maradaas u tolan lahayn oo aan maro uga soo saari lahayn”ayuu hadalkiisa ku sii daray Mowliid Macaani Maxamuud.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Oktoobar, 2008.